चन्द्रयान-२ पछि अब भारतको टार्गेट सूर्यतर्फ, लन्च गर्दै आदित्य-एल १ | Kendrabindu Nepal Online News
चन्द्रयान-२ पछि अब भारतको टार्गेट सूर्यतर्फ, लन्च गर्दै आदित्य-एल १
७ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:१७
हालै मात्र चन्द्रमामा चन्द्रयान–२ पठाएको भारतले अब सूर्यतर्फ नजर लगाएको छ । भारतको अन्तरिक्ष मिसनमा काम गर्दै आइरहेको संस्था इसरोले आदित्य एल – १ सन् २०२० को मध्यसम्म लन्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । यसको उद्देश्य सूर्यको सतहको तापक्रम ६००० केल्भिनभन्दा कोरोनाको तापक्रम किन ३०० गुना बढी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु हो जब कि कोरोना सतहभन्दा धेरै माथि छ । सूर्यको यो बाहिरी आवरणलाई तेजमण्डल भनिन्छ जुन हजारौं किलोमिटरसम्म फैलिएको छ ।
आदित्य एल –१ ले के गर्छ ?
के.सिवन (इसरो) ले भने– आदित्य एल–१ पृथ्वीबाट १.५ मिलियन किलोमिटरको दूरीमा रहनेछ । त्यहाँबाट यसले लगातार सूर्यमाथि नजर लगाउनेछ । यसले त्यहाँ सूर्यको बाहिरी आवरण अर्थात् तेजमण्डलको विश्लेषण गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनमा सूर्यको तेजमण्डलको महत्वपूर्ण प्रभाव हुने भएकाले यो काम महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।
आदित्य एल–१ ले अरू अध्ययन पनि गर्छ
रिपोर्टका अनुसार आदित्य एल–१ सूर्यको फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर र तेजमण्डलको अध्ययन गर्न सक्षम हुनेछ । यसले सूर्यबाट निस्कने विस्फोटक कणहरूको पनि अध्ययन गर्छ । इसरोका अनुसार यो कण पृथ्वीको तल्लो अर्बिटमा कुनै कामको हुँदैन । यिनलाई पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रबाट बाहिरै राख्नु आवश्यक छ । एजेन्सी
आदित्य-एल १, चन्द्रयान
Prevनियमित मन्दिर जाँदा के हुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ ?
थाहानगरमा ६० बर्षीय महिलामाथि बलात्कार प्रयासNext